Guarin iyo Shaqiri oo daan-daamiyey Atlanta
HomeWararka MaantaGuarin iyo Shaqiri oo daan-daamiyey Atlanta
Fredy Guarin ayaa laba gool oo aad u qurux badan ku dhirbaaxay ciyaar dubihii Inter madaxa laba ka kala dhigay Atlanta oo 10 ciyaaryahan ku ciyaaraysay kuna garaacday 4-1.
Xidiga reer Colombia ayaa wacdaro la soo gallay garoonka , waxaana dedaalkiisa shidaal u noqday rigoodhihii uu shabaqa ku hubsaday Xherdan Shaqiri daqiiqadii labaad ee ciyaarta, iyadoo kooxda Roberto Mancini ay u muuqdeen kuwo is difaac ku jira qaybtii hore ee ciyaarta ka dhacaysay garoonka Stadio Atleti Azzurri d’Italia lana odhan karay Atalanta waxay u qalantay barbar dhaca uu keenay Maximiliano Moralez.
Laakiin Guarin ayaa goolkiisii koobaad Interna u noqoyay kii labaad ee ciyaarta shabaqa ku hubsaday intaan qaybtii horeba dhamaan ciyaarta.
Kooxda Martida loo ahaa waxaa adhaxda ka sii jabiyey hadalkii iyo murankii uu garsooraha kala hor yimid Yohan Benalouane oo huruud la siinayay laakiin doodiisu keentay in isla markiiba huruud labaad loo dhiibo halkiina casaan ay isku bedesho oo garoonka dibada looga saaray wax yar uun kadib isu soo noqodkii qaybta labaad.
Fredy Guarin ayaa markale gool saddexaad raaciyey halka Rodrigo Palacio uu ka afraad ku soo afmeeray ciyaarta, sidaasna Inter ay kaga sare martay dhibcaha iyo liiska kala saraynta horyaalka kooxda ay isku magaalada yihiin ee Ac Milan, kuna fadhiisatay kaalinta sideedaad.
Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers Full Game Highlights / Feb 14 / 2017-18 NBA Season
Barcelona Oo Dalab Lacag Badan Wata U Dirtay Ozil Iyo Mourinho Oo Ku Dagaallamaya